बालबालिकाको पिसाबमा रगत देखिने समस्या | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य बालबालिकाको पिसाबमा रगत देखिने समस्या
बालबालिकाको पिसाबमा रगत देखिने समस्या
२०७४, १४ श्रावण शनिबार २०:१७
बालबालिकामा कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखिने समस्या पनि आउँछ । यस्तो समस्या आएमा सोझै विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । पिसाबमा रगत देखिने धेरै कारण हुन सक्छन् । तीमध्ये एउटा ‘ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस’ हो । यो भनेको नै पिसाबमा रगत जाने समस्या हो।
यस्तो कहिलेकाहीँ सामान्य संक्रमणबाट पनि भएको हुन सक्छ भने केहीमा मिर्गौला तथा पिसाब नलीको ठूलो समस्याका कारण हुन सक्छ । संक्रमण बाहेक रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा असर हुँदा पनि यो समस्याले बालबालिकालाई पिरोल्छ । त्यसकारण यस्तो समस्या देखिए लगत्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ। होइन भने त्यसले भित्रभित्रै मिर्गौला खराब गरिसकेको हुनसक्छ।
बालबालिकाको घाँटी तथा छालामा संक्रमण देखिएको छ भने पनि त्यसको कारणले मिर्गौलामा असर पार्ने हुन सक्छ । संक्रमण भएको दुई–तीन हप्तामा मिर्गौलामा असर पुग्ने यस्तो समस्यालाई ‘पोस्ट स्टेप्टोकल ग्लुमेरुलनेफ्राइटिस’ भनिन्छ । यो समस्यामा बच्चाको पिसाबबाट प्रोटिन निस्कने, रगत आउने, रक्तचाप बढ्ने, पिसाब कम हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छ।
मिर्गौलाको रोग भनेको ‘साइलेन्ट’ रोग हो । यसका लक्षण हत्तपत्त देखिँदैन । तर, जब देखिन्छ त्यो बेला ढिला भइसकेको हुन सक्छ । बालबालिकाहरुमा पटक–पटक पिसाबको संक्रमण देखिन्छ भने त्यो मिर्गौलाको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसको समयमै उचित उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ । बच्चामा पिसाबको संक्रमण विभिन्न कारणले हुन सक्छ । सामान्यतया बालिकाको तुलनामा बालकलाई पिसाबको संक्रमण कम हुन्छ । तर, बालकमा पिसाबको संक्रमण देखियो भने त्यसले मिर्गौलामा समस्या निम्त्याएको हुन सक्छ।
बालबालिकामा पिसाबको संक्रमण पटक–पटक देखिए पनि एन्टिबायोटिक वा अन्य सामान्य उपचार गरेर क्षणिक रुपमा निको पार्ने गरिन्छ । तर, उक्त संक्रमण किन दोहोरिरहेको छ ? भनेर थप जाँच गरिँदैन । फलस्वरुप कालान्तरमा त्यसले मिर्गौलामा गम्भीर असर गर्ने खतरा रहन्छ । यस्ता समस्यालाई सामान्य ठानेर चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रा नानीबाबुहरुलाई मिर्गौला रोगको गम्भीर अवस्थामा धकेल्नु हो । बालबालिकाको मिर्गौलामा हुने सबै रोग तथा समस्याको नेपालमा उपचार सम्भव छ । त्यसकारण समयमा नै उचित उपचार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। swasthyakhabar.com
डा. विवेक तोदी, कन्सलट्यान्ट पेडियाट्रिक नफ्रोलोजिस्ट
Previous articleलोन्ली प्लानेटमा समावेश भएसंगै म्याग्दीमा पर्यटक बढे
Next articleशरीरमा पानी कम हुँदा देखिने ९ लक्षण